४१ फोटोमा र्हेुहोस् प्रियंका–निकको तेस्रो रिसेप्सनमा को धेरै आकर्षक, को धेरै हट ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
४१ फोटोमा र्हेुहोस् प्रियंका–निकको तेस्रो रिसेप्सनमा को धेरै आकर्षक, को धेरै हट ?
डिसी नेपाल , ८ पौष २०७५
मुम्बइ। प्रियंका चोपडा र निक जोनसले विवाहपछि तस्रो रिसेप्सन दिए । मुम्बइमा दिइएको यो तेस्रो रिसेप्सन बलिउड सेलिब्रेटीहरुको लागि दिइएको थियो । यी दुईले १–२ डिसेम्बरमा उदयपुरमा हिन्दू र क्रिस्चियन रिवाजअनुसार विवाह गरेका थिए । तेस्रो रिसेप्सन मुम्बइको ताज ल्याण्डस एण्ड होटलमा भयो । बलिउडकै लागि दिइएको यो रिसेप्सनमा कैयौं सेलिब्रेटी पुगेका थिए । ४१ फोटोमा हेर्नुहोस् रिसेप्सनमा को–को पुगे । को–को धेरै आकर्षक देखिए र को–को धेरै हट देखिए ?